Queen: Rock Tour bụ egwuregwu egwu nke anthological rock band | Gam akporosis
Freddy Mercury na Queen pụtara na Queen: Rock Tour n'ụzọ dị egwu iweta akụkọ ihe mere eme banyere igwe egwu site na mbido ya yana egwu kacha mara amara. Ozo nile emere nye ndi a nke anyi nwere site n’otu ubochi taa.
Egwuregwu musical nke dabere na nke ịpị n'oge kwesịrị ekwesị na bọtịnụ nke mere na egwu na-akpọ na anyị ahụwo n'ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ. Ọ naghị abịa ihe ọhụụ na igwe, mana ya na akụkọ ihe mere eme nke Queen, abụ ha na usoro foto niile, nkọwa na uwe ejiji ha ka anyị nwee ike ịhazi ndị otu otu ahụ.
1 Adịchaghị adị na gburugburu iji zụta
2 20 + Official Songs on Queen: Rock Tour (Nke a Na Na Na)
3 Tinye ekweisi ma nwee obi ụtọ
Adịchaghị adị na gburugburu iji zụta
Ka anyị kwuo Queen: Rock Tour bụ a adịchaghị egwu egwuregwu na nke ọ bụla n'afọ anyị nwere ike na-ege ntị egwu kacha ewu ewu nke otu egwu ahụ n'otu afọ ahụ. Ya mere ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbaso akụkọ ihe mere eme nke ìgwè ahụ, anyị ga-agafe igbe iji nweta abụ ha niile ka ha nwee ike ịkpọ ha.
La Isi ụgbọ ala Queen: Rock Tour na-akpọrọ anyị gaa arụmọrụ nke ndị otu na usoro nke ahịrị ndị dị iche iche nke anyị ga-pịa ịmegharị mgbe ha rutere nso.
Ihe ndekọ ọ bụla ga-enye gaa na guitar ma ọ bụ Taylor, nke na-enye ya nnukwu ọkpọ dị oke egwu iji nwee ọ enjoyụ nnukwu egwu nke otu nnukwu nkume anthological. Oge a nile nwere ihe odide pụrụ iche nke na-e imitateomi ndị otu 4 ahụ.
20 + Official Songs on Queen: Rock Tour (Nke a Na Na Na)
Queen: Rock Tour ga-akpọrọ anyị tupu ihe karịrị abụ ndị isi iri abụọ dịka "Bohemian Rhapsody" a ma ama, "Dobe Onwe Gị Ndụ", "Anyị Ga-agba Gị Ọgba", "Achọrọ m ịhapụ onwe m" ma ọ bụ "Anyị bụ ndị mmeri". A na-anọchi anya egwu nke ọma ma nwee nnukwu ụda dị ka anyị nwere ike ịnụ ụtọ na Galaxy Note 10 + anyị.
Ka anyị na-enwe ọganihu na ọkwa ndị ahụ bụ otu abụ nke ìgwè ahụ, anyị nwere ike nata ụgwọ ọrụ ma jiri nwayọ kpọghee ọdịnaya nke gaa n'òtù ahụ dị ka uwe nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ ma ọ bụ ngwa ndị na-eje ozi iji chọọ ebe ọ bụla mma.
Ma ọ bụ ya site na ihuenyo mbụ anyị ga-enwe Freddy Mercury na ndị ọzọ na-eme ka anyị nwee obi ụtọ. Eziokwu bụ na ha enweela ike ịkọwapụta ihe dị mkpa nke otu a ka ndị egwu ya wee nwee ọ enjoyụ dịka dwarfs na egwuregwu a na anyị na-akwado iji ezigbo ekweisi.
Tinye ekweisi ma nwee obi ụtọ
Queen: Rock Tour kwa na-eme ka anyị laghachi azụ n'afọ ndị ahụ mgbe ìgwè ahụ malitere, dị ka e mere fim ahụ nke e nyere Rami Malek maka iji gosi ya Freddie Mercury. Foto nke oge gara aga, egwu na ihe niile iji bụọ abụ kachasị mma maka egwuregwu nke ụdị a. Naanị ihe a ga-enyocha bụ mmetụta dị a itaa ka ọ nwere na otu egwu nke agwaworị ndị agbụrụ ya site n'ọgbọ ndị toro eto.
N'ihu ya kariri nke oma, ọ bụ ezie na ọ naghị eru ogo ọdịyo na egwu akụkọ ifo ndị ahụ anyị nwere ike igwu egwu ma nwee ọ pressụ ogologo pịa na ihuenyo maka May ka kụọ ya guitar. Omenala na ihe niile n'ozuzu ha na-enyefe nnukwu ahụmịhe egwuregwu. Mana ihe ekwuru, a ga-ahụ ya na ọgbọ ndị ọ na-abụ abụ, ebe ọ bụ na anyị na-ekwu okwu banyere otu nkume sitere na 80s.
Queen: Rock Tour bụ na-egwuregwu agba akaebe otú oké nkume a gbalaga bụ nakwa na nke ọ bụla n'ime "ukwe" ya ka dị ndụ maka anyị iji nwee ọ managingụ na ijikwa onye ọ bụla so na Queen. Cheta na kwa afọ ọ nwere ego nke € 2,99.
Egwuregwu egwu dị egwu nke nwere otu ọkpụkpọ egwu kachasị mma na akụkọ ntolite ka ị nwee obi ụtọ na ekweisi dị mma.
Nwere nnukwu Freddy Mercury
Nyochaa akụkọ ihe mere eme nke ìgwè ahụ site na afọ ya na ọrụ ebube ya kachasị dị ka nke dị na Montreal
Oge zuru oke iji nwee oge dị egwu nke sọks May ma ọ bụ nnukwu olu Mercury
Hazie uwe onye ọ bụla so na ya
Naanị otu afọ n'efu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Queen: Rock Tour dị ugbu a dị ka egwuregwu egwu iji weghachite akụ egwu